टोपी राष्ट्रियताको ५० बर्ष - फ्री प्रेस नेपाल
Home सबै विविध जीवनशैली कला संस्कृति
टोपी राष्ट्रियताको ५० बर्ष
by नविन सुब्बा
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार १०:४९
in कला संस्कृति
२०२७/२८ सालतीर मात्र बुनेको टोपी आएकोछ, नेपाली समाजमा । त्यो टोपी लगाएर जुन राष्ट्रियता हामी निर्माण गर्न खोजिरहेकाछौं, त्यो आफैमा समस्याग्रस्त छ ।
नविन सुब्बानेपालको विविधतापूर्ण समाजमा नेपालीपन के हो भनेर ठ्याक्कै खुट्याउन सकिदैंन । हिंजो ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लगाएको नेपाली भाषा बोल्ने र हिन्दु धर्म मान्नेलाई नेपाली भन्ने मान्यता थियो । तपाई राष्ट्रिय पहिचान दिने त्यो टोपी खोज्दै जानु भयो भने २००४ सालमा त्यो टोपी कहिंकतै पाउनु हुदैंन ।
ईतिहास खोतल्दा २०१७ सालमा अहिलेको छिपाको स्वरुपको टोपी पाईन्छ । २०२७/२८ सालतीर मात्र बुनेको टोपी आएकोछ, नेपाली समाजमा । त्यो टोपी लगाएर जुन राष्ट्रियता हामी निर्माण गर्न खोजिरहेकाछौं, त्यो आफैमा समस्याग्रस्त छ ।
हिंजोको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालको जुन विविधता छ, त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने काम बडो दुरुह छ । तर अहिले त्यो विविधताबीच बसेर हेर्दा अवस्था फेरिएकोछ । किनकीे सौन्दर्यका चेतनाहरु सौन्दर्यका अवधारणाहरु फरक परक हुन्छन भन्ने चेत सहितको विमर्श प्रारम्भ भएकोछ । सौन्दर्यको त्यो अवधारणा फिल्ममा आईपुग्दा एक खालको बन्न पुग्दछ भन्ने चिन्तन जागेकोछ ।
हामीले भारतीय सिनेमाले अंगिकार गरेको हिन्दु धर्मको भरतनाट्यशास्त्रको अवधारणा अनुरुप हिरो भनेको धिरोदात्त, धिरललित, धिरपुरुष हुनुपर्छ र हिरोईन मृगनयनी, कोमलाँगी , बारुले कम्मर भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पछ्याउँछौ । दैनन्दिन जिवनमा हामीले मान्दा पनि सौन्दर्यको परिभाषा त्यसरी नै बनाईरहेका हुन्छौ । सुन्दरतालाई त्यसरी नै परिभाषित गर्दै आईरहेकाथियौं ।
तर पछिल्लो चरणमा यसमा फरक सोंचाई आएकोछ । त्यो त होईन रहेछ भन्ने भएकोछ । जस्तै टोपी नै खोज्दै जाँदापनि मधेसमा मैथिली पुरुष पग लगाउँछन् हिमालमा चढेर हेर्दा शेर्पाले अर्के टोपी लगाईरहेकाहुन्छन् । फरक त टोपीमै रहेछ भन्ने ब्रम्हज्ञान पलाएकोछ।
फिल्ममा हिंजो भनिएको भरतनाट्यशास्त्रले ब्याख्या गरेको सुन्दरता हिन्दी फिल्मबाट सरेर हामीकहाँ आयो । धेरैले यो अवधारणासंग सम्बन्ध जोड्न सकेनन । जसको आँखा बदामी छ । अलिकता कालो बर्णकोछ । उनीहरु त्यो अवधारणासंग जोडिन सकेनन । तिनले काँचको पदार्मा आफ्नो उपस्थिति नै पाएनन ।
पछिल्लो चरणमा तिनलाई हामी यहाँ छैनौ भन्ने बोध भयो । हामी कस्तो छौं त ? खोज्न थालियो । खोज्नुपर्ने आफ्नो समाजभित्र थियो तर हामी त्यो खोज्ने क्रममा पश्चिमतीर पुग्यौं । त्यसले गडबड गर्यो । समाज भित्र सौन्दर्यको अवधारणा के छ ? नायकत्व भनेको के हो ? चरित्रचित्रण भनेको के ? त्यो खोज्नु पथ्र्याे त्यो भैरहेकोछैन । हामी भरतनाट्यशास्त्रबाट अरस्तुको सौन्दर्यशास्त्रभित्र रुमल्लिईरहेको अवस्था छ । तथापि आफ्नै समाजभित्र घोत्लिने कर्म नभएकापनि होईनन । भैरहेकोछ, तर कम भैरहेकोछ ।
राईहरुको मुन्धुममा हेत्छाकुप्पा भन्ने चरित्र आउँछ । त्यसले एउटा निश्चित जिवनदर्शनलाई परिभाषित गरिदिन्छ । गुरुङको बडो प्रचलित कथा छ । माथिबाट दुईटा चरा– एउटा मयूर एउटा धोबीचरा तराई घुम्न झर्छन । धोबीचराले मयुरलाई तल लगेको हुन्छ । त्यो मयुरलाई उसले तल लगेर बेचिदिन्छ । सुन किन्छ र सुनको दाँत लगाएर फर्कन्छ ।
कथाको संरचना गर्दा या चरित्र चीत्रण गर्दा हामी यस्तो कथा भन्दारहेछौं । त्यो कथा भन्ने शैलीभित्रबाट हाम्रो सौन्दर्य खोज्नु पर्यो । त्यो खोजाई पुगेकोछैन ।
हामीले अभिनयको प्रशिक्षण त लिन्छौ । हिंजो नवरस सिद्धान्त लिईरहेकाथियौं आज स्ताना स्लावास्की भन्दै कुदिरहेकाछौं । तर स्तानाले पनि मलाई नपछ्याऊ भन्छ । तिम्रो के हो त्यो खोज भन्छ । तर हामी चाहिं आफ्नै खोज्ने भन्दा पछ्याईरहेकाछौं । अहिले हाम्रो फिल्मको ठुलो समस्या यहि हो ।
हामीले लिइरहेको भरतनाट्यशास्त्रभित्र पनि विविधता छ । भारतीयहरुले सोंच्ने तरिका र नेपाली खस आर्यनहरुले सोंच्ने तरिका फरक छ । उनीहरुको कथा भन्ने शैली फरक छ । स्वस्थानी ब्रतकथालाई हेर्ने हो भने त्यसले चरित्रलाई जसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यो दैनन्दिन जिवनमा पनि देखिन्छ । भारतमा टीका लगाउँदैनन । हाम्रोमा टीका लगाईन्छ । कुन मनोबिज्ञानले कसरी, कुन कारणले गर्दा त्यो ठाँउमा आईपुग्यो ? यहाँको र तलका खस आर्यबीच किन भिन्नता आयो ?
कथावाचनमा पनि फरक छ । यहाँ स्थानीय कथाहरु बनाइएकाछन् । स्वस्थानी ब्रतकथामा मृगस्थलीको कुरा आउँछ । त्यहिं पशुपति पर्तीरको कुरा गरिन्छ । त्यसको संरचना र चरित्रचीत्रणको कुरा गर्दाखेरी पनि भारत भन्दा यहाँ केहि भिन्न छ । तर त्यो भिन्नता खोज्न सकेनौं भने उ भन्दा हामी कसरी भिन्न हुन्छौ ? खस आर्यबीचको विविधता नै कसरी खुट्याउँछौं ? हो त्यहि तत्व नै खोज भएकोछैन । खस आर्यनकै भएकोछैन । त्यहाँ भित्र भएका भिन्न पहिचान दलित, मधेसीहरुको पनि भएकोछैन । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मले त्यहि खोज्ने प्रयत्न गरिरहेकोछ ।
Tags: issue-2Nabin Subbaअंक-२नविन सुब्बा
मुन्धुमी गायिका झुमाको गला र किक हान्ने कलाको कथा